सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ , महिनावारी भएकै बेला देशका लागि पदक र पुरस्कार ! – Etajakhabar
सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ , महिनावारी भएकै बेला देशका लागि पदक र पुरस्कार !
ताइवानमा भएको खेलमा महिनावारी भए पनि आफ्नो शरीरको समस्यालाई दबाएर उनले प्रतिस्पर्धा गरिन् । यसैगरी दक्षिण कोरियामा सम्पन्न जिन्जु ओपन अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा पनि उनी महिनावारी भएकै अवस्थामा थिईन् । २ दिनको महिनावारी भएकी निशा त्यो बेला पदक ल्याउन सफल भईन् । स्वर्ण पदककै आशा गरिएपनि फाइनलमा कोरियन खेलाडीसँग पराजित हुँदै निशाले रजत पदक जितिन् । खेलका दौरान आत्म विश्वासका साथ रिङमा उत्रने निशालाई महिनावारीले केही न केही समस्या पारेपनि खेलमा भने कुनै असर गरेको छैन ।नवीन लुईटेलले महिला खबरमा लेखेका छन् ।
तेक्वान्दो खेलाडी निशा रावल तेक्वान्दो खेलाडी निशा रावल महिनावारी भएका बेला राम्रो गर्नु हुन्न, कसैलाई छुनु हुन्छ भन्ने सोच गलत भएको तर्क गर्छिन् । भन्छिन् ‘हामी त महिनावारी भएकै बेला देश विदेश घुम्छौं । बाटोमा कति नदी नाला, ताल तलैया, मठ मन्दिर पर्छन् । राम्रो नराम्रो सबै ठाउँमा जानुपर्छ । सबैसँग घुलमिल हुनुपर्छ । यदी कसैलाई छुदा वा मठ मन्दिर, ताल तलैयामा जाँदा पाप लाग्ने भए त देशकै शीर उचो बनाउने पदक तथा पुरस्कारहरू जित्थ्यौ होला र ?’ उनले महिनावारी कुनै पाप नभएर सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी रहेको बताइन् ।
तेक्वान्दो खेलाडी निशा रावल महिनावारी भएका बेला राम्रो गर्नु हुन्न, कसैलाई छुनु हुन्छ भन्ने सोच गलत भएको तर्क गर्छिन् । भन्छिन् ‘हामी त महिनावारी भएकै बेला देश विदेश घुम्छौं । बाटोमा कति नदी नाला, ताल तलैया, मठ मन्दिर पर्छन् । राम्रो नराम्रो सबै ठाउँमा जानुपर्छ । सबैसँग घुलमिल हुनुपर्छ । यदी कसैलाई छुदा वा मठ मन्दिर, ताल तलैयामा जाँदा पाप लाग्ने भए त देशकै शीर उचो बनाउने पदक तथा पुरस्कारहरू जित्थ्यौ होला र ?’ उनले महिनावारी कुनै पाप नभएर सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी रहेको बताइन् । समाज परिवर्तनशिल भएपनि महिनावारीका सन्र्दभमा अझै गलत मानसिकता रहिरहेको प्रति स्त्री रोग विशेषज्ञहरू चिन्तित छन् । ‘महिनावारी आफैँमा स्वास्थ्य समस्या होइन । यो त प्राकृतिक कुरा हो’ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना साहले भनिन् । तैपनी यो प्रति गलत मानसिकता यथावतै रहेको र यससम्बन्धी भ्रम चिर्नु जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक १५, २०७४ समय: ९:०६:२१
नेपालको खराब प्रदर्शन : रोहित पौडेल शून्य रनमा आउट, नेपालको पाँच विकेट गयो
भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले नेपाली क्रिकेटको तारिफ गर्दै यसो भने !
आईसीसीले ‘नमस्कार नेपाल’ भन्दै सन्दीपको भिडियो ट्विटरमा राख्यो र दियो यस्तो संदेश (भिडियो सहित)